ဆောင်းလူ – အပေါင်ဆုိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းလူ – အပေါင်ဆုိုင်
အောက်တုိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃
နံနက်စောစောစီးစီးပင် …. လုံလုံခြုံခြုံထုပ်ပုိုးထားသည့် နှလုံးသားတစုံကုို အပေါင်ဆုိုင်တွင် … ပါးစပ်နှစ်ပေါက်နှင့် အလဲအထပ်လုပ် လုိုက်သည်။ ရလာသည့် ပါးစပ်နှစ်ပေါက်အတွက် အတုိုးအနေအဖြင့် လျှာတဖက် တုိုးလာသည် …။ ပါးစပ်ပေါက်တုို့သည်ကား အ ကောင်းပတိ မဟုတ် …။ ၀ါးစရာသွားတုို့သည် ပဲ့သည့်နေရာ ပဲ့ …ရွဲ့သည့်နေရာ ရွဲ့နှင့် …။
လျှာတဖက်ကုို အပေါင်ထားခဲ့ရသည့်အတွက် ..ပါးစပ်တပေါက်အတွက် .. အရသာခံစရာ လျှာမရှိတော့ …။ မတတ်နုိုင် … သူ ခဏ …. ကုိုယ် ခဏ အသုံးပြုမှ ရမည် ..။ ထုို့ထက် အရေးကြီးသည်ကား နှလုံးသားတစုံ အပေါင်မဆုံးရန် ဖြစ်သည်။ လျှာမရှိပေမယ့် နှလုံးသားဖြင့် ခံစား၍ ရနုိုင်သေးသည် …။
ခုတလော အပေါင်ဆုိုင်တွေတုိုးလာသည် …။ အပေါင်ခံသူတုို့သည် နှလုံးသားကုို ပေါင်နှံမည်ဆုိုလျှင် … ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း လက်ခံကြသည်။ သုံးဖန်များလွန်းသည့် ဥနှောက်အားလည်း မလုိုချင်ကြ ..။ တခြားအရာတုို့ကုိုကား သုံးပြီးသားဆုို မလုိုချင်ကြ ..။ ထုို့အ တွက် လမ်းမပေါ်တလျှောက် … ရထားဘူတာ၊ ကားဆိပ် တလျှောက် ပေါင်နှံသူတုို့၏ နှလုံးသားနေရာသည် ဟာလာဟင်းလင်းဖြင့် …။ နှလုံးသားမရှိသည့်အတွက် ဥနှောက်သည်ပင် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ် …။
တချို့ ကား နှလုံးသားမရှိ …
တချို့ကား ဥနှောက်မရှိ ….
တချို့ကား ပါးစပ်နှစ်ပေါက်နှင့် …
တချို့ကား လျှာ နှစ်ထပ်နှင့် …
တချို့ကား မျက်လုံးလေးဖက်နှင့် ..
တချို့ကား နားခြောက်ဖက်နှင့် …
အပေါင်ဆုိုင် ပုိုင်ရှင်သည် အပေါင်ဆုံးပစ္စည်းတွေကုို လမ်းဘေးတွင် ချရောင်းနေလေသည် …။ သူကုိုယ်တုိုင်ကား ဥနှောက်နှစ်ထပ် ..နှလုံး သား နှစ်ထပ် ..ပါးစပ်နှစ်ပေါက် …လျှာ နှစ်ထပ် …မျက်လုံးလေးထပ် ..နားခြောက်ဖက်နှင့် …
၀ယ်သူတုို့သည် အလုအယက် ..အတုိုးအဝှေ့ …။ လမ်းဘေး အပေါင်ဆုံးချရောင်းဆုိုင်တွင် … အင်ဂျင်နီယာ၏ ဥနှောက်သည် ပွစိစိ …၊ လေးခန်းမှာ နှစ်ခန်းလောက်ပျက်နေသည့် ဆရာဝန်၏ နှလုံးသားသည် ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ..။ ၀ယ်သူတုို့သည် တုိုးကြဝှေ့ကြနှင့် ပေါပေါပဲပဲနှင့် ပြန်ထုတ်ရောင်းသည့် အပေါင်းဆုံး ပစ္စည်းများကုို သူ့ထက်ငါ အလုအယက်တုိုးဝှေ့ကြကုန်၏ …။
တနေရာတွင် .. ဥနှောက်တစ်စုံသည် မလှုပ်မယှက် …။ နောက်တနေရာတွင် … နှစ်လုံးသားတစ်စုံသည် မလှုပ်မယှက် …။ ကျိန်းသေသည် ၀ယ်သူတွေကုို ဆွဲဆောင်မှုမရှိအောင် .သူတုို့ သေချင်ဟန်ဆောင်နေကြသည် …။
နောက်တနေ့ အပေါင်ဆုိုင်သုို့ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် … ဥနှောက်နှင့် နှလုံးသားကုို မသိမသာ အကဲခတ်ကြည့်ခဲ့လုိုက်မည် …။